Umthetho Wezimo Ezingalindelekile - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Umthetho Wezimo Ezingalindelekile
Phawula: Lesi sihloko asikhulumi ngezimo ezihlobene nobhubhane lwe-coronavirus (COVID-19). Buyekeza isihloko sezimo ezingalindelekile ze-COVID-19 ukuze ufunde ngalokho okushiwoyo ngezimo ezingalindelekile ze-COVID-19, futhi ngokukhethekile imingcele yalokho okuhlanganisiwe eyenziwe ngemva kuka-March 14, 2020.
Usuku okuqala ngalo: January 20, 2021
Le Nqubomgomo Yezimo Ezingalindelekile ichaza indlela ukukhansela okusingathwa ngayo uma izigameko ezingalindelekile ongenakwenza lutho ngazo zenzeka ngemva kokubhukha futhi zikwenze kube yinto engenakwenzeka noma kube ukwephula umthetho ukuqedela uhambo lwakho. Le Nqubomgomo isebenza ekubhukheni kwezindawo zokuhlala kanye noKokuzithokozisa.
Uma le Nqubomgomo ivumela ukukhansela, ilawula futhi ize kuqala ngaphambi kwenqubomgomo yokukhansela yokubhukha. Izivakashi ezithintwe yisigameko esithintiwe kule Nqubomgomo zingakhansela ukubhukha kwazo futhi, kuye ngezimo, zibuyiselwe imali, ikhredithi yokuvakasha, kanye/noma okunye ukubonelelwa. Ababungazi abathintwe yisigameko esihlanganiswe kule Nqubomgomo bangakhansela ngaphandle kwemiphumela engathandeki, kodwa, kuye ngezimo, amakhalenda abo angase avinjelwe ezinsukwini zokubhukha okukhanseliwe.
Iziphi izigameko ezihlanganisiwe
Le Nqubomgomo isebenzisa igama elithi “iSigameko” ukuze ibhekisele ezimweni ezilandelayo ezivelayo ngemva kokubhukha, ezingalindelekile ngesikhathi sokubhukha, futhi ezivimbela noma zibe isithiyo kwezomthetho sokuqedela ukubhukha.
Ukushintsha kwezimfuneko zokuvakasha zikahulumeni. Ushintsho olungalindelekile ezimfunekweni ze-visa noma iphasiphothi ezibekwa yi-ejensi kahulumeni ezivimbela ukuvakashela endaweni ethile. Lokhu akuhlanganisi amadokhumenti okuvakasha aphelelwe isikhathi noma ezinye izimo zomuntu ezihlobene nokugunyazwa kwesivakashi ukuba sivakashe.
Izimo eziphuthumayo nobhubhane. Uhulumeni umemezele izimo eziphuthumayo zendawo noma zikazwelonke, ubhubhane, umqedazwe, nezimo eziphuthumayo zempilo yomphakathi. Lokhu akuhlanganisi izifo ezisezweni elithile kuphela noma ezivame ukuhlotshaniswa nendawo ethile—ngokwesibonelo, umalaleveva e-Thailand noma umkhuhlane wodenga e-Hawaii.
Imingcele yokuvakasha kahulumeni. Imingcele yokuvakasha ibekwe yi-ejensi kahulumeni evimbela ukuvakashela, ukuhlala, noma ukuphindela emuva usuka endaweni yeNdlu. Lokhu akuhlanganisi imithetho yokuvakasha engabophezeli neziqondiso zikahulumeni ezifanayo.
Izenzo zamasosha nokunye okusongelayo. Izenzo zempi, izinsongo, ukuhlaselwa, impi yezombangazwe, ubuphekula, iziqhumane, amabhomu, izishoshovu, izinxushunxushu, ukuvukela umbuso, iziyaluyalu, nokubhikisha.
Izinhlekelele zemvelo. Izinhlekelele zemvelo, izenzo zikaNkulunkulu, ukunqamuka kwamasevisi asemqoka ngezinga elikhulu, ukuqhuma kwentabamlilo, ama-tsunami, nezinye izigameko zezimo zezulu ezimbi kakhulu nezingavamile. Lokhu akuhlanganisi isimo sezulu noma izimo ezingokwemvelo ezivame ngokwanele ukuba zingabonwa kusengaphambili kuleyo ndawo—njengeziphepho eziba khona ngenkathi yeziphepho e-Florida.
Konke okunye. Le Nqubomgomo ivumela kuphela ukukhansela eZigamekweni ezichazwe ngenhla. Konke okunye kukhishiwe. Izibonelo zezimo le Nqubomgomo engavumeli ukukhansela kuzo zihlanganisa: isifo esingalindelekile, ukugula, noma ukulimala; izibophezelo zikahulumeni njengomsebenzi wokwahlulela, ukuvela enkantolo noma imisebenzi yobusosha; imithetho yokuvakasha noma ezinye iziqondiso zikahulumeni (ezingekho ngaphansi kokuvinjelwa kokuvakasha); ukukhansela noma ukushejula kabusha umcimbi obubhukhelwe; neziphazamiso zezinto zokuhamba ezingahlobene neSigameko esihlanganisiwe njengokuvalwa komgwaqo, nokukhanselwa kwendiza, isitimela, ibhasi nesikebhe. Uma ukhansela ukubhukha kulezi zimo, inani olibuyiselwayo lizonqunywa inqubomgomo yokukhansela esebenza ekubhukheni.
Okumelwe kwenziwe ngokulandelayo
Uma sikutshela noma sishicilela imininingwane eqinisekisa ukuthi le Nqubomgomo isebenza ekubhukheni kwakho, sicela ulandele iziqondiso zokukhansela esizinikezayo. Uma siye sakutshela noma sashicilela imininingwane mayelana nendlela le Nqubomgomo esebenza ngayo, kufanele ukwazi ukukhetha ukukhansela ngaphansi kwale Nqubomgomo ngokuya ekhasini lakho Lohambo nokukhansela ukubhukha okuthintekile. Uma ukholelwa ukuthi le Nqubomgomo iyasebenza ekubhukheni kwakho, kodwa singazange sikutshele noma sishicilele imininingwane mayenala neSigameko, sicela uthintane nathi ukuze ukhansele ukubhukha kwakho. Kuzo zonke izimo, kufanele ukulungele ukunikeza amadokhumenti abonisa indlela iSigameko esiye sakuthinta ngayo wena noma ukubhukha kwakho.
Uma unemibuzo, sicela uthintane nathi.
Ezinye izinto okufanele uzazi
Le Nqubomgomo isebenza kukho konke ukubhukha okunosuku lokungena olunosuku lokuqala kwayo noma ngemva kwalo. Le Nqubomgomo ayisebenzi ekubhukheni kwe-Luxe, okulawulwa Inqubomgomo Yokubuyisela Imali Yesivakashi Ye-Luxe ehlukile.
Ungakhansela ukubhukha, kodwa uma isikhathi sokungena siphakathi namahora angu-24, indlela yokukhansela ku-inthanethi ingase ingatholakali.
Inqubomgomo yethu Yokubuyisela Izivakashi Imali ingasiza ezimweni lapho indlu noma amasevisi engekona lokho obukulindele.